HORDHAC: Morocco vs Iran – Gool FM
Ian Wright oo Pierre-Emerick Aubameyang u diray farriin ku aaddan mustaqbalkiisa
Kooxda Manchester United oo markaan u Kabo gashanaysa Kalidou Koulibaly oo qiimo dhimis lagu sameeyey
Jack Grealish oo loo sheegay inuu ku biiro koox weyn ee ka dhisan Premier League
Kooxda Elman oo tijaabada caafimaad marsiisay xiddig u dhashay dalka Ghana… + SAWIRRO
Suárez oo ka warbixiyay aragtidiisa ku aadan in Barcelona ay la soo saxiixato weeraryahan cusub
Horudhac: Watford vs Liverpool… (Kooxda dhinaceeda dhulka la dhigi la’yahay ee Reds oo caawa booqanaysa Vicarage Road)
Horudhac: Bournemouth vs Chelsea… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka ka dhacaya Vitality Stadium)
Suarez oo falanqeeyay muhiimada ay leedahay guusha kulanka El Clásico ay la ciyaarayaan Real Madrid
Guardiola oo shaaca ka qaaday mudada Aymeric Laporte uu ka maqnaanayo garoomada
Waa sidee xaalada dhaawaca Gerard Pique kahor kulanka El Clasico?
HORDHAC: Morocco vs Iran
CR Shariif June 15, 2018
( Russia ) 15 Juunyo 2018. Xulalka Morocco iyo Iran ayaa fooda is dari doona cayaartooda koowaad ee koobka adduunka waxayna qeyb ka yihiin Group B
Tartanka: Koobka adduunka
Waqtiga: 06:00 pm Saacada Geeska Africa
Garsooraha: Cüneyt Çakır (Turkey)
Garoonka: Krestovsky Stadium
Wararka labada koox
Morocco iyo Iran ayaa markii u horeysay ku kulmaya koobka adduunka cayaarta ka dhici doonta magaalada St Petersburg.
Morocco ayaa rajeynaya inuu taam noqdo daafacooda midi gee Nabil Dirar kadib markii uu seegay labadii kulan ee saaxiibtinimo oo ay la dheelen Slovakia iyo Estonia sababo dhaawac kubkaa.
Iran waxaa ganaax kaga maqnaan doona burburiyahooda dhexe ee Saeid Ezatolahi.
Waxaa jira xiddigo shaki kuu ku jiro waxaa qeyb ka ah weeraryahanka Mehdi Taremi iyo laacibkii hore ee Fulham iyo Nottingham Forest Askhan Dejagah.
Morocco iyo Iran ayaa marnaba ku kulmin koobka adduuka. Xaqiiqdii, waxay is wajaheen hal cayaar hore oo ku dhamaatay barbaro.
Morocco ayaa usoo baxday markii shanaad koobka adduunka tan iyo sanadkii 1998. Marnabana kama aysan gubdin wareega 16 (1986), waxayna ku hareen heerka Groupa seddax kamida afartii hore ay kasoo qeyb galeen koobka adduuka.
Iran ayaa kusoo baxday koobka adduunka markii labaad oo xariir ah. Yeelkeede marnada ma aysan gaarin wareega Bux baxda, waxay guuleysteen hal cayaar 12 kulan oo ay dheeleen tartanka seddax barbaro siddeed kulanka waa laga adkaatay – halka guul oo ay koobka adduunka ka gareen waxa ay gareen USA 21 June 1998 cayaar ku dhamaatay 2-1.
Shaxda Macquulka ee Moroco vs Iran.
HORDHAC: Egypt vs Uruguay
HORDHAC: Portugal vs Spain